सुरु भयो जिडब्लुएमको टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सुरु भयो जिडब्लुएमको टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प
काठमाडौं, मंसिर १०
ग्रेट वाल मोटर्स (जिडब्लुएम) गाडीहरूको नेपालको लागि आधिकारिक विक्रेता भि.जी. इम्पेक्स प्रालीले आफ्नो दुई एसयुभीहरूमा ‘टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम्प’आयोजना गरेको छ। कम्पनीको यो अवसर थर्ड जेन हवाल एच–६ र हवाल जोलायनका साथै पीक–अप पावरमा लागु हुनेछ।
उक्त टेस्ट ड्राइभ र एक्सचेन्ज क्याम हिजो बिहिबार सुरु भएको हो। यो अर्को साताको बुधबारसम्म लागु हुनेछ। क्याम्पमा इच्छुक व्यक्ति जो कोहीले सहभागिता जनाउन सक्छन्। जसको लागि व्यक्ति थापाथलीस्थित ग्रेट वाल मोटर्सको शोरुममा बिहान १० बजेदेखि साँझको ५ बजेभित्र उपस्थित हुनुपर्नेछ।
कम्पनीका अनुसार ग्राहक एवम् इच्छुक सहभागीहरूले जिडब्लयुएमको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत पनि टेस्ट राइडको लागि बुकिङ गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै टेस्ट ड्राइभका लागि आउने प्रत्येक ग्राहकहरूले आकर्षक उपहार पाउनुका साथै ४३ इन्चको एमआई स्मार्ट टिभी जित्ने मौका पाउनेछन्। यस क्याम्पअन्तर्गत ग्राहकहरूले गाडी एक्सचेन्ज (साट्ने) गरी बुकिङ गर्न सक्नेछन्। यसमा आकर्षक बोनस, नगद छुट, निःशुल्क एसेसोरिज र सहज फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
चिनियाँ कम्पनी जिडब्लुएमले अक्टोबर २०२१ मा मात्रै संसारभर १,१२,०६९ वटा गाडी बिक्री गरेको छ। २०२१को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीसहित जिडबलुएमको जम्मा ९,९६,११४ गाडी बिक्री भएको छ। जुन भनेको पहिलेको आर्थिक वर्षको तुलनामा ३०.३ प्रतिशतले गाडीको बिक्रीमा वृद्धि भएको हो।
चीनमा विगत ११ वर्षदेखि सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने नम्बर १ एसयुभी हवाल हो। हालसम्म संसारभर ६५ लाखभन्दा बढी हवाल बिक्री भएको छ। चीनको घरेलु बजारमा नम्बर १ स्थानमा रहेको पीक–अप पावर निर्यातमा पनि लगातार २४ वर्ष देखि सबै भन्दामाथि छ।
संसारभर यो गाडी १९ लाखवटा बिक्री भएको छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत गाडी घरेलु बजार अर्थात् चिनियाँ बजारमै बिक्री भएको छ।
चीनमा सबैभन्दा धेरै एसयुभी र पिक–अप उत्पादन गर्ने ग्रेट वाल मोटर्स सन् १९८४ मा स्थापना भएको सवारी उत्पादन कम्पनी हो। यो गाडी २०७८ सालको असारमा मात्रै नेपाली बजार भित्रिएको हो। कम्पनीका अनुसार हालसम्म यसले निकै सकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, ०१:१४:१३
रोयल इन्फिल्डको सबैभन्दा सस्तो बाइकको मूल्य पाँच लाख बढी, अरू मोडलको कति?
टाटाले भारतमा सार्वजनिक गर्‍यो डार्क एडिशनको सफारी
हिरोले ल्यायो बजारमा विद्युतीय स्कुटर
विगतमा जस्तो झ्वाट्ट यातायात बन्द नहोस्: यातायात व्यवसायी (भिडिओ)
यात्री बिजुली बाइक हुन लाग्यो 'सोल्ड-आउट', बुकिङ गर्न आग्रह
होन्डाले सार्वजनिक गर्‍यो ५० सिसीका यी दुई स्कुटर